विचार अमेरिका र चीनबीच युद्ध केले गराउला ? जोसफ एस. नेइ
बाह्रखरी - शुक्रबार, फागुन २१, २०७७
चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीले हालै गरेका अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्धलाई पुनव्र्याख्या (रिसेट) गर्ने प्रस्ताव गरे ।
प्रतिउत्तरमा ह्वाइट हाउसका प्रवक्ताले भने –अमेरिका–चीन सम्बन्ध अत्यन्त प्रतिस्पर्धात्मक भएकाले अमेरिकाले आफ्नो स्थान सशक्त बनाउनुपर्ने अमेरिकाले ठानेको छ । सहजै बुझ्न सकिन्छ जो बाइडनको सरकारले चीनका सम्बन्धमा पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पका नीतिलाई सजिलै उल्टाउँदैन ।
कतिपय विज्ञहरू इतिहासकार थ्युसिडिडीजले गरेको ”पेलोपोनेसियनको लडाइँको कारण एथेन्सको बढ्दो शक्तिबाट स्पार्टा डराउनु” रहेकोे टिप्पणीसँग जोड्दै भन्छन् – अमेरिका र चीनको सम्बन्ध त्यस्तो द्वन्द्वात्मक अवस्थामा प्रवेश गरेको छ जहाँ स्थापित प्रभुत्व उदीयमान शक्तिशाली प्रतिद्वन्द्वीका कारण बिस्तारै लडखडाउँदैछ ।
यो लेखक त्यति निराशावादी व्यक्ति हैन । मेरा विचारमा आर्थिक र पारिस्थितिक परनिर्भरताका कारण शीतयुद्धका संभावना कमजोर छन् । प्रत्यक्ष युद्धको संभावना त झनै न्यून छ । किनभने दुवै देशलाई एक अर्कासँग विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य गर्नुमा धेरै फाइदा छन् । तर, गलत अनुमानको संभावना सधैँ जीवितै हुन्छ र केही व्यक्ति निन्द्रामा हिँड्ने गल्तीले ठूलो विघ्न निम्त्याउने आकलन गर्छन् जुन पहिलो विश्वयुद्धमा भएको थियो ।
इतिहासमा त्यस्ता घटनाका धेरै उदाहरण छन् जहाँ गलत बुझाइका कारण शक्ति सन्तुलन नै फेरिएका छन् । उदाहरणका लागि, अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनको सन् १९७२ को चीन भ्रमणलाई लिन सकिन्छ । त्यसबेला उनको विचारमा आर्थिकरुपमा कमजोर हुँदैगरेको अमेरिकाले बढ्दो सोभियत संघसँग शक्ति सन्तुलन मिलाउन जरुरी थियो । तर, निक्सनले जुन अमेरिकालाई ओर्लँदो ठानेका थिए त्यो अमेरिका आफ्नो पूर्व अवस्थामा फर्कने र दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वकै उत्पादनमा ठूलो हिस्सा ओगट्ने अवस्थामा पुग्दैथियो ।
निक्सनले बहुध्रुवीय संसारको आकलन गर्दै थिए । तर, त्यसको दुई दशक पनि नपुग्दै सोभियत संघको पतन भयो र अमेरिका विश्वकै एकल शक्तिराष्ट्र बन्नपुग्यो । आजको संसारमा केही चिनियाँ विशेषज्ञहरू अमेरिकाको जीवटपन (लडेर सजिलै उठ्नसक्ने खुपी) को न्यून आकलन गर्दैछन् । अनि अब चीनको आधिपत्य कायम हुने उद्घोष गर्दैछन् । तर, यो पनि आफैँमा अत्यन्त खतरनाक गलत अनुमान हुनसक्छ ।
त्यस्तै अमेरिकाले चीनको शक्तिलाई अधिक वा न्यून आकलन गर्ने संभावना पनि त्यत्तिकै छ जुन अत्यन्त खतरनाक हुनसक्छ । अमेरिकामा आर्थिक र राजनीतिक शक्ति समूहहरू छन् जुन दुवै प्रकारका आकलन गर्ने क्षमता राख्छन् । अमेरिकी डलरका आधारमा हेर्ने हो भने चीनको अर्थतन्त्र अमेरिकाको दुईतिहाइ जत्रो छ । तर, धेरै अर्थशास्त्री भन्छन् – चीनले सन् २०३० को दशकको कुनै समयमा अमेरिकाको अर्थतन्त्रलाई जित्नेछ । यसो भन्नेहरूले दुवै देशको संभाव्य आर्थिक वृद्धि आआफ्नै ढंगले राखेका होलान् ।
के अमेरिकी नेतृत्वले यो परिवर्तनलाई रचनात्मक सम्बन्ध बढाउनका लागि उपयुक्त ठान्छन् वा उनीहरू डराएर सम्झौता गर्छन् ? चिनियाँ नेतृत्वले थप जोखिम लिन तयार होला कि यी दुवैले शक्ति सन्तुलनको बदलिँदो परिवेशमा विश्वव्यापी सार्वजनिक हितका लागि सहकार्य गर्लान् ?
थ्युसिडिडीजको भनाइ मनन् गर्दा प्राचीन ग्रिसले संसारलाई छिन्नभिन्न पार्न लडाइँले ठूलो भूमिका खेल्यो । त्यसका लागि दुईटा कारण प्रमुख रहे : नयाँ शक्तिको उदय र यो उदयले स्थापित शक्तिमा जन्माएको भय । दोस्रो कारण पहिलो जत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । त्यसैले चीन र अमेरिका दुवैले नयाँ शीत वा प्रत्यक्ष युद्ध गराउन सक्ने प्रकारको अनावश्यकरुपमा अतिरंजित भयलाई बेवास्ता गर्नुपर्छ ।
चीनले अमेरिकाको अर्थतन्त्रलाई उछिन्यो भने पनि देशको राष्ट्रिय आय भूराजनीतिक शक्ति मापनको एउटैमात्र आधार होइन ।
नरम शक्तिको मामलामा चीन अमेरिकाभन्दा निकै पछाडि छ र अमेरिकाको सैन्य खर्च चीनको भन्दा करिब चार गुना धेरै छ । हुनत, चीनको सैनिक शक्ति पनि विगतका वर्षहरूमा निकै बढेर गएको छ तथापि सैनिक शक्तिको अध्ययन गरिरहेका विश्लेषकको निचोड के रहेको छ भने पश्चिमी प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रबाट चीनले अमेरिकालाई बाहिर निकाल्न सक्दैन ।
अर्कोतर्फ विश्वकै सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक अर्थतन्त्र रहेको अमेरिका संसारको सबैभन्दा ठूलो द्विपक्षीय दाता पनि हो । आज, करिब १०० देश चीनलाई आफ्नो सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार मान्छन् भने अमेरिकालाई ५७ ले मात्र । चीनको योजनाअनुसार अर्को दस वर्षमा ऊ करिब १० खर्ब डलर (१ ट्रिलियन डलर) ‘बेल्ट तथा रोड‘ कार्यक्रमअन्तर्गत पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न चाहन्छ भने अमेरिकाले आफ्नो सहयोग घटाएको छ । चीनलाई आर्थिक शक्ति हासिल गर्न यस्को बजारको आकार, बाहिरी देशमा गरेको लगानी तथा विकास सहयोगले मद्दत गरेको छ । अमेरिकाको तुलनामा चीनको सम्पूर्ण शक्ति बढ्ने संभावना देखिन्छ ।
परन्तु, शक्ति सन्तुलनको मामिलामा सहजै अनुमान गर्न सकिन्न । अमेरिकाले आफ्नो लामो समयसम्म रहेको शक्तिको फाइदा कायमै राख्नेछ जुन चीनको संवेदनशीलतासँग विरोधाभाषपूर्ण हुनेछ ।
पहिलो त भूगोल नै हो । अमेरिका समुद्रले घेरिएको छ र छिमेकीहरू मित्रतापूर्ण सम्बन्धमा छन् । चीनको १४ देशसँग सिमाना जोडिएको छ भने भारत, जापान तथा भियतनामसँग सीमा विवाद पनि छन् जसले उसको असिबल र मसीबल (सामरिक र नरम शक्ति)को सीमा निर्धारण गर्छ ।
इन्धन अर्को त्यस्तो क्षेत्र हो जहाँ अमेरिका सशक्त छ । एक दशकअघि अमेरिका आयातित इन्धनमा आश्रित थियो तर सेलढुंगालाई तेल बनाउने प्रविधिमा आएको क्रान्तिले अहिले अमेरिका कच्चा तेलको निर्यातक बनेको छ । यही समयमा, चीन इन्धनमा थप आश्रित भएको छ र मध्यपूर्वी देशबाट आयात गर्दैछ । यो तेल उसले समुद्रको बाटोबाट आफ्नो देश ल्याउँछ जुन बाटोका सम्बन्धमा उसको भारतसँग विवाद छ ।
अमेरिकालाई जनसांख्यिक फाइदा पनि छ । अमेरिका जनसंख्या घट्ने संभावना नदेखिएको एउटामात्रै प्रमुख विकसित राष्ट्र हो । जनसंख्याको आधारमा अमेरिका तेस्रो ठूलो देश रहिरहनेछ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको जनसंख्या वृद्धिदर विगतका केही वर्षमा कम भए पनि जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक हुने अवस्था छैन । यो अवस्था रुस, युरोप र जापानमा भने जनसंख्या घट्ने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा चीन भने एउटा वास्तविक डरमा छ – “धनी हुनुभन्दा पहिल्र्य बुढ्यौलीले छुनु ।” चाँडै नै भारतले चीनको जनसंख्यालाई उछिन्दै छ र उसको श्रमिक संख्या सन् २०१५ मा अत्यधिक रहेको छ ।
अमेरिका बायोटेक, न्यानोटेक र इन्फोटेक जस्ता केही मुख्य प्रविधिमा अझै अगाडि छ । यी प्रविधि एक्काइसौं शताब्दीको आर्थिक बृद्धिमा अग्र पंक्तिमा आउँछन् । चीनले पनि अनुसन्धान र विकासमा प्रशस्त खर्च गर्दैछ र कति क्षेत्रमा गतिलो प्रतिस्पर्धा पनि गर्दैछ । तर, संसारका २० मुख्य अनुसन्धान गर्ने विश्वविद्यालयमध्ये १५ अमेरिकामा छन्, चीनमा एउटा पनि छैन ।
जुन व्यक्तिहरू प्याक्स सिनिका (दक्षिण पूर्वीय एशियामा शान्ति र वृद्धिको युग) र अमेरिकाको पतनको घोषणा गर्दैछन् तिनले विहंगम दृष्टिले शक्ति सन्तुलनका सबै आयाम हेर्नसकेका छैनन् । अमेरिकी अभिमान जहिले पनि खतरनाकै रहेको छ तर अतिरंजित भय पनि खतरनाक हुन्छ । किनभने यसले उग्र प्रतिक्रिया उत्पन्न गराउन सक्छ । त्यस्तै, चीनको बढ्दो राष्ट्रवाद पनि उत्तिकै खतरनाक रहेको छ । किनभने अमेरिका खस्कँदो स्थितिमा छ भन्नेमा विश्वास गर्नथाल्यो भने चीन अत्यन्त खतरनाक अवस्थामा पुग्नसक्छ । त्यसैले दुवै देश गलत अनुमान र गलत हिसाबकिताबबाट जोगिनुपर्छ । हुन पनि, धेरै खतरा हाम्रो आफ्नै गलत गर्ने क्षमतामा निर्भर हुन्छ ।
(हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्रोफेसर)
शुक्रबार, फागुन २१, २०७७ मा प्रकाशित
#जोसफ एस. नेइ